Photography Sevhisi Yekukunda Zvigadzirwa - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Photography Sevhisi Yekukunda Zvigadzirwa
Hapana chikonzero chekutumira masampuli, kuchengetedza nguva uye mutengo.
Govera yakanakisa sevhisi pamutengo unodhura.
Kugona kukwana kwakakwana kwevatengi kupfura inoda pasina nguva refu yekumirira.
Inonyanya kugadzirwa uye kugadzirwa mavhidhiyo uye mifananidzo yeFB kushambadzira.
Ipa sevhisi yekupfura yakagadzirirwa pane script kana chiitiko.
Nhengo dzeboka redu rekutora mifananidzo vane ruzivo rwekunyora mifananidzo.
CJ Nyanzvi Yemifananidzo Yevhisi
Yakasarudzika Chigadzirwa Mifananidzo
Yakajeka, yakasviba, yakachena machena kumashure. Nyanzvi yakapfurwa uye yakarongedzwa muedu studio.
Sekusarudzika kwekuwedzera kune chero pikicha, tinobvisa kumashure uye tinounza yakajeka mufananidzo muPNG fomati.
Sarudza mamodheru akasiyana maererano neakasiyana maficha ezvigadzirwa kuti zvigadzirwa zvako zvinyanye kukwezva.
Lifestyle Chigadzirwa Photography
Seimwe nzira kune yakachena machena kumashure, isu tinobatanidza props, zvigadzirwa zvakagadzirwa, mwenje unoshamisa, stock stock Photography, kana musanganiswa wezvose zvina kugadzira zvigadziriso zvidiki zvine hunyanzvi hwekuona.
Kugadzira Dhizaina Service
Tinogona kukupa iwe nhevedzano yemasevhisi senge LOGO dhizaini, online shopu dhizaini, posita dhizaini, nezvimwe zvirinani kushambadzirwa nebasa riri nani.
Yakasarudzika Kupfura Chiitiko
Tinogona kushongedza iyo yekupfura chiitiko sezvaunoda.
Vhidhiyo Yekukunda Zvigadzirwa
Nhanho 1: Kupinda / Kunyoresa.
Pinda neako wega CJ account. Kana iwe usina imwe, ndapota tinya "Register" kumisikidza account nyowani.
Nhanho 2: Tsvaga chigadzirwa
Pinda zita rezvigadzirwa kana SKU kana mufananidzo kuti utsvage chigadzirwa chaunoda kupfura.
Nhanho 3: Tumira chikumbiro chekutora mifananidzo
Sarudza chigadzirwa chaunoda kunyorera mafoto kana vhidhiyo, tinya "Photography Chikumbiro".
Nhanho 4: Simbisa chako chikumbiro chekutora mifananidzo.
Tine mhando mbiri dzekutora mifananidzo: foto uye vhidhiyo. Paunowedzera chikumbiro chako, unogona kusarudza chero mhando uye wotsanangura zvaunoda kuti upfure. Ndokumbira utarise kuti chikumbiro chezuva nezuva chakashomeka uye iwe unogona chete kutumira zvishanu zvikumbiro kwatiri pazuva.
Nhanho 5: Tarisa mhinduro dzekukumbira
Mushure mekusimbisa chikumbiro, unogona kutarisa mamiriro acho neMy CJ> Yangu Photography> Photography Chikumbiro sekuratidzwa kunoitwa nemufananidzo. Kazhinji, tichazvidzorera kwauri mumazuva maviri ekushanda.
Nhanho 6: Kubhadhara
Mushure mekuongorora chikumbiro chako, tichaita kotesi yebasa raunosarudza. Unogona kudzvanya "Tarisa Zvinyorwa" kuti uwane uye ubhadhare.
Nhanho 7: Tarisa odha yako
Mushure mekuzvibhadharira, odha yacho icharatidza semufananidzo pazasi uye unogona kutarisa chinzvimbo kana invoice neMy CJ> Yangu Photography> Photography Orders.
© 2021	Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese